UJulia Baranovskaya: ubomi bomntu, i-biography emva kokuqhawula umtshato, abantwana, indoda. Umntu omtsha uJulia Baranovskaya, ifoto
Musa ukuphupha amaphupha akho: ubomi bobuqu bukaJulia Baranovskaia
Yulia Baranovskaya - enye yezona zidumileyo "abafazi abalahliwe" - ngoku yonke into enhle kakhulu. Owesifazane othandekayo, esele adlulise umlilo, amanzi kunye nobhedu bamabhobho, iintsiba ezicatshulwayo, zingabandakanywa kwisicatshulwa igama elithi "ibhola" kwaye yenze umsebenzi wokubonakalisa ithelevishini. Ewe, kwaye ebomini bomntu kaYulia Baranovskaya, ukugweba iifoto kwi-Instagram, kwakukho utshintsho olukhawulezayo. Kodwa kungekudala kungekudala ushiya kwintsapho yendoda ethandekayo uJulia ebizwa ngokuba ngumkhohlakali. Kwaye sicinga ukuba le nto yayiyintambo ehlazo - isenzo esiqhelekileyo somntu wanamhlanje okhetha ukuhlala nomfazi okhululekile, kungekhona kunye nomthandayo. Nanku ukutshatyalaliswa kukaJulia amaphupha akhe - kuyabuhlungu ngokwenene. Emva koko, wayephupha ngokuba ngumbukeli weTV obalaseleyo, kwaye waba ngowona mfazi oxoxwa ngayo kumdlali webhola lebhola ...
I-Biography yeBaranovskaya: Iintloni ezintathu ezinkulu
UJulia Baranovskaya wazalelwa eLeningrad ngoJuni 1985 kwintsapho yotitshala kunye nenjini. Ukususela ebuntwaneni kwintombazana yayinoxanduva olukhulu-isiphumo semfundo engqongqo yam. Umfundi ohloniphekileyo, intloko yeklasini, inxaxheba yama-olympiads amaninzi yayisoloko ibekwe njengomzekelo kwaye iqikelele ikamva elihle. Kodwa umntwana oqhelekileyo waseSoviet akazange aphuphe nantoni na into enje de kube yinto enzima ... Ukudumala ebomini kuJulia kwakukuhamba koyise kwintsapho. Nangona kamva umama wayenentsapho entsha, intombi yam yayingenakuxolela ubaba iminyaka eyi-15. Emva kokuhamba kwakhe, intombazana eneminyaka eli-10 ubudala yafumana iphupha - wayefuna ukuba udumo, kangangokuthi uyise wayeziqhayisa ngaye kwaye wazisola ngezenzo zakhe. Kwiminyaka embalwa kamva uJulia wayesazi ukuba angayiqonda njani iphupha lakhe, kodwa unina wayiphazamisa ... "Ukuqonda" kwaMamino kwakungowokudumala kwesibili kuJulia. Umama akazange avume ukuvumelana nabani na ukuba intombi yakhe yaba ngumlobi weendaba kunye nombonisi wethelevishini, kwaye wamkholisa ukuba angene kwiSebe lezoQoqosho kwiYunivesithi yaseAerospace Instrumentation. Ukufundela intombazana yokudala yaba ngumsebenzi onzima, kwaye wayengazi ukuba athathe njani amaphepha ukuze unina akhubekiswe. Kwakukho intlanganiso ebulalayo ebomini iBaranovskaya. U-Julia wayenelisekile ukushiya izifundo ezithandekayo waza wadana ngenxa yesithathu. Kodwa ngokudumala kamva ...
Yulia Baranovskaya noAndrei Arshavin
UAndrei Arshavin noYulia Baranovskaya: Intlanganiso enye inokutshintsha ubomi
Akukho zihlandlo eziqhelekileyo ebomini. Uthi ukuthini - idwala, isiphetho, ngokubhekiselele kulo mntu uhamba-kodwa ngaloo mini yonke into yavela ukuze uJulia Baranovskaya noAndrei Arshavin bahlangane. UJulia nomngane wakhe bachitha isigxina semini elunxwemeni, kwaye xa ndandisoloko ndiya ekhaya, ndabona ukuba imoto yahlwaywa. Intombazana ecasulayo yatshintsha izicwangciso zakhe waza wagqiba ukuhamba ngeNevsky Prospekt. Emva koko wadibana nenkanyezi ephakamileyo yebhola. Emva kwenyanga, uBaranovskaya wathuthela e-Arshavin. Kungekudala wakhulelwa kwaye emva kwekhefu lokufunda akazange abuyele eyunivesithi. Olunye ubomi lwaqala: unina, indoda eyaziwayo, ingxoxo yobomi bomntu, i-banter yabathengi be-britan ngenxa ye-Yulia engenakukhathalela into engathandi ngayo iNgilandi, iifoto kwi-instagram kunye nabanye abafana naye ...
Utyhile iimfihlakalo ezimbi zobomi bomntu siqu kaKarina Razumovskaya. Tshukisa! Khangela apha
Oku kwaqhubeka iminyaka elithoba. U-Julia wayenomyeni wakhe: wazala abantwana, wamlinda kwiimirhumo, axhaswa ngamaxesha anzima, ahamba esuka endaweni eya endaweni, evuthayo kwiintatheli ukuba axoxe ngobomi bakhe, akazange akholelwe amahemuhemu. Intombazana engenalwazi ayizange ibe ngumfazi omdala. Wayengumfazi, nangaphandle kwesitampu esaziwayo kwipasipoti, kwaye uyindoda ekhululekile. Wayethukuthele xa exelelwa ukuba unemveli kwinqanaba lakhe, kwaye waxhamla ngokukhawuleza xa iintatheli zaqala elinye ilungu lombhobho "malunga nesitampu kwipaspoti." U-Arshavin ubalekele kwintsapho, mhlawumbi awuyi kuthi igama, ubeke yonke into kwindawo yayo.
UJulia Baranovskaya emva kokuzalwa komntwana wesithathu
U-Arshavin, njengoko kubonakala, akahloniphi iiklabhu zabesifazane, kwaye uJulia waguquka. Wayekhumbula indlela amehlo akhe atshisa ngayo kwiminyaka yokuqala yobomi bakhe xa wamxelela ukuba uya kuba ngumbonisi weTV. Kwaye uJulia wakhumbula ukuba wafumana njani imbono yokuvula iqela labesifazane eLondon, kodwa ... wakhulelwa okwesithathu.
U-Andrey Arshavin kunye nentombi yakhe entsha
UJulia Baranovskaya kunye nabantwana bakhe
Ubomi bomntu kaYulia Baranovskaya emva kokuqhawula umtshato
UAshashavin waya kwelinye ibhinqa xa uJulia eneenyanga ezinhlanu ukhulelwe. Ukutsho ukuba kwakunzima ixesha akuthethi nto. Kuxinzelelo olubi emva kokuqhawula umtshato, uJulia waxoshwa ngaphandle ngabantwana, okanye ngabahlobo, okanye ngoomama nodade, abaxhasa rhoqo imihla, kodwa iphupha. Emva kokuba uBaranovskaya wayefuna ukubuyela ngokukhawuleza ngaloo mini ebushushu, echitha kunye nomhlobo ogwini olummandla, ambethe, emsusa ekuhambeni naseNevsky. Ngomso olandelayo uthabathe amaxwebhu avela kwunivesithi, uze ufike ntoni. Kodwa kuyisono sokucinga: bekungeze kubekho loo ntlanganiso, abantwana abathathu abahle bebengayi kuzalelwa. U-Julia uyazibhokoxa ngokubanzi, ekhohlwa nokuba ngumsebenzi wakhe wokubeletha. Kwaye kwaphupha iphupha kwifestile ...
Nantsi into eyenzekayo ku-Igor Petrenko emva kokuqhawula umtshato eKlimova - khangela apha
Umenzi uPeter Sheksheev, odibana noBaranovskaya kwelinye lamaqela abucala, wavula umnyango kwilizwe lamaphupha akhe. Iprojekthi yokuqala yethelevishini kaYulia-post-show "Yintoni amadoda ayifunayo?", Apho wayengcali. Emva koko kwakukho aMantombazana, Ukulayishwa kwakhona, kwaye ekugqibeleni intetho ethi "Owesilisa nowesifazana", apho uJulia Baranovskaya wayebambisana noGordon njengombambano kwiingxabano zentsapho. Amaqela eenkwenkwezi, iifayile zenkwenkwezi, iiprojekthi ezintsha kwithelevishini, incwadi ethi "Yonke into engcono" - ngamanye amaxesha amaphupha ayenzeka ngakumbi kunokuba sithanda. Into ephambili ayikukungcatsha ...
Yulia Baranovskaya noAlexander Gordon
Akukho mntu wazi malunga noDmitry Nagiyev okwamanje. Iifoto ezikhethekileyo zibone apha
Umntu omtsha uJulia Baranovskaya: yonke into iqala nje
Ngubani odibana noJulia Baranovskaya? Umtshini we-TV ye-Instress uyathandwa kakhulu. Ngokuqhelekileyo ubonisa iifoto zabafana abatsha kwaye ubonisa ukuba konke okusemandleni akhe kukuhle. Kungekudala abalandeli bakhe baxubusha ubudlelwane nomdlali we-Alexei Chadov kunye nohambo lwabo lothando lwaseItali, njengoko befumene ukuba uJulia sele edibana nomnye umfana. Uthando olutsha lomfazi wangaphambili lomdlali webhola ngu-stylist odumile uVgeny Sedov. Kwaye u kugweba iifoto, isibini sinzima kakhulu. Sifuna ukucinga ukuba kungekudala kuya kuba neenguqu ezinkulu ebomini bomntu kaYulia Baranovskaya. Nika into kuThixo. Emva koko, ngoku uyazi iimfihlelo zolonwabo lwabesetyhini.
U-Julia Baranovskaya no-Alexei Chadov (isithombe esivela ku-Instagram)
UJulia Baranovskaya, isithandwa sakhe esitsha uEvgeny Sedov kunye nabantwana bakhe
Yulia Baranovskaya noYevgeny Sedov
Izimfihlakalo zobomi bomntu siqu kaYulia Men'shova
UDmitry Shepelev uqala ubomi obutsha
Ngaba uyazi ukuba ngubani osesithombeni? Namhlanje embhedeni wale ndoda yamantombazana, u-Miss Russia kuphela
Injongo kunye neqaqambileyo uPolina Gagarina: indoda, abantwana, intsapho kunye nemisebenzi
Iingubo zokuhlwa zoNyaka omtsha 2017: I-TOP-4 fashion fashion
I-pie ngamakhowe anetyuwa
Ukutya kunye nempilo yomzimba
Iindlu ezintle kakhulu zeenkwenkwezi
Indlela yokulungiselela isaladi kwiziqhamo
Umfazi owayengumfazi kaDmitry Peskov watsho ngokucacileyo malunga nokulwa notywala
Imibala yeenwele: iingcebiso
Ubusi: izixhobo ezixhamlayo
Indlela yokulungisa isaladi "I-Rainbow": iincwadi zokupheka eziphambili
Indlela yokwenza i-hydrangea iqhakaze
Iipropati ezixhamlayo ze-popcorn
I-Snack ne-salted herring "I-Festive"
Ukukhuliswa kwabantwana bonyaka wesine wobomi
Ukutya kunye nezilwanyana
Inveli kunye nendoda esatshatileyo
Iingcebiso ezimbalwa zomyalelo ngaphakathi kwindlu